ဆဲ့ဆုဘွန်းပွဲတော်(Setsubun)၊ အဲ့ဟိုးမခိ (Ehomaki)
(အိုနိဝဆိုတို...ဖုကုဝအုချိ)ဆိုပြီးဂျပန်ကလေးငယ်တွေရဲ့ကဗျာရွတ်ဆိုရင်းပဲစေ့လေးတွေကိုကြဲကြတာကြားဖူးကြမှာပါ။ ၂၀၂၁ခုနှစ်ရဲ့ ဆဲ့ဆုဘွန်းပွဲတော်(Setsubun)ကတော့ဖော်ဝါရီလ၂ ရက်ဖြစ်ပါတယ်။ နှစ်စဥ်နှစ်တိုင်းကိုဖေဖော...
ဂျပန်မှာကံညံ့တဲ့နှစ်ဆိုတာဘာလဲ။ ကံညံ့တဲ့နှစ်ရေတွက်ပုံနှင့် အခြေခံအသိပညာ(What isabad year? Basic knowledge of yakutoshi and counting years)
ဂျပန်တွင်နှစ်အကုန်ပိုင်းနှင့်နှစ်သစ်ကူးနီးလာသောအခါဂျပန်လူမျိုးများအတွက် စိတ်အနှောက်အယှက်ဖြစ်စေတဲ့အကြောင်းအရာကတော့ “လာမယ့်နှစ်မှာမိမိဟာကံဇာတာကောင်းမယ့်နှစ်ကျမလား။ကံညံ့တဲ့နှစ်ကျမလားဆိုတာပါပဲ။ ပ...
အရွယ်ရောက်သူများနေ့အခမ်းအနားဆိုတာဘာလဲ။ဘယ်ကစတာလဲ(What is the coming-of-age ceremony in Japan? Let's know the origin)
"လူကြီး" အဖြစ်ရောက်ရှိလာသည်ကိုအသိအမှတ်ပြုသည့်အနေဖြင့်အရွယ်ရောက်အခမ်းအနားကိုဂျပန်တွင်ကျင်းပကြသည်။ ဂျပန်နိုင်ငံ၌သင်သည်အသက် ၂၀ ရှိလျင်အရွယ်ရောက်သူတစ် ဦး ဖြစ်ပေမယ့်သို့တခြားနိုင်ငံများမ...
နှစ်သစ်ကူးအလှဆင်ပုံ（How to decorate New Year's decorations）
နှစ်သစ်ကူးအလှဆင်ခြင်းအမျိုးမျိုးရှိသည်၊ အောက်ပါအတိုင်း ၃ ပိုင်းခွဲခြားထားသည်။ Kadomatsu (ထင်းရှူးအလှဆင်ခြင်း) တစ်နှစ်တာ၏နတ်ဘုရား(Toshikamisama)မှအိမ်အသီးသီးသို့ကြွရောက်သောအခါအမှတ်အသားတစ်ခု...
ဂျပန်မှာနှစ်သစ်ကြိုဆိုဖို့အတွက်ဘာတွေပြင်ဆင်လဲ(ဒုတိယပိုင်း)(Get ready foragood year ②)
နှစ်သစ်ကူးကတ်ကိုဘယ်အချိန်မှာပို့မလဲ နှစ်သစ်ကူးအတွက်ပြင်ဆင်နေချိန်မှာခေါင်းထဲလာပြီးရှုပ်အောင်လုပ်နေတာကတော့နှစ်သစ်ကူးကဒ်ပို့ခြင်းပါ။နှစ်ဆန်းတစ်ရက်နေ့အမှီရောက်ရှိရန်အတွက်ဒီဇင်ဘာ ၂၅ ရက်အထ...
ဂျပန်မှာနှစ်သစ်ကြိုဆိုဖို့အတွက်ဘာတွေပြင်ဆင်လဲ（ပထမပိုင်း)(Get ready foragood year①)
ဂျပန်မှာနှစ်သစ်ရောက်ခါနီးတဲ့အခါအိုးဆိုးဂျိလို့ခေါ်တဲ့ သန့်ရှင်းရေးလုပ်ခြင်း၊ နှစ်သစ်ကူးကတ်များပြင်ဆင်ခြင်းနှင့်ကောက်ညှင်းမုန့်ပြင်ဆင်ခြင်းအစရှိသည့်ပြင်ဆင်စရာများစွာရှိပါတယ်။ သို့သော်လည်းဘယ်ကနေဘယ်လိုစတ...
ဂျပန်ဆယ့်နှစ်ရာသီခွင်အကြောင်း တတိယပိုင်း (About the Japanese zodiac) ③
ဂျပန်ဆယ့်နှစ်ရာသီခွင်အကြောင်း ဂျပန်တွင်နှစ်ကုန်ချိန်နှင့်နှစ်သစ်ကူးရောက်သောအခါဒီနှစ်ဟာ(XX) နှစ်ဖြစ်လို့ နောက်နှစ်ဟာ（XX）နှစ်ဖြစ်မယ်ဆိုပြီးကြားဖူးတာရှိပါသလား။ ငါ့ကို（XX）နှစ်တွင်ဖွားခဲ့လို့（XX）တာ။ ဆယ်...
ဂျပန်ဆယ့်နှစ်ရာသီခွင်အကြောင်း ပထမပိုင်း　(About the Japanese zodiac) ①
ဂျပန်ဆယ့်နှစ်ရာသီခွင်အကြောင်း ဒုတိယပိုင်း　(About the Japanese zodiac) ②
ကုမ္ပဏီတွေ၊ကျောင်းတွေပိတ်တဲ့နှစ်ကုန်နဲ့နှစ်သစ်အချိန်မှာဘယ်လိုအချိန်ကိုအသုံးချကြမလဲဆိုပြီးတွေးနေကြသူအများကြီးရှိမှာပါ။အိပ်တာနဲ့ပဲအချိန်ကုန်သွားမယ်လို့ဆိုနေသူတွေအတွက် အသုံးချပုံကိုမိတ်ဆက်ပေးပါမယ်။ နှ...